Apple TV + wuxuu hawada ka saari doonaa dukumenti dokumenti ah oo ku saabsan weerarkii ka dhacay daarihii mataanaha ee 11/XNUMX | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV + wuxuu sii deyn doonaa dukumenti dokumenti ah oo ku saabsan weerarkii ka dhacay daarihii mataanaha ahaa ee 11/XNUMX
Taasi waa masiir sebtember kow iyo tobnaad 2001 ayaa lagu gubay xusuusta dhamaanteen ee daawanaya iyadoo lala yaaban yahay telefishanka sida laba diyaaradood ugu dhufteen daaraha mataanaha, iyo sida daqiiqado kadib ay u burbureen oo sababay boqolaal dhimasho ah.
Bisha Sebtember ee soo socota ayaa la fulin doonaa 20 sano ee ku saabsan weerarkii argagaxiso ee masiiriga ahaa, iyo sidee bay noqon kartaa si kale, Apple TV + wuxuu baahin doonaa dukumiinti gaar ah oo ku saabsan September 11-keeda. Waxaad kuheli doontaa aragti cusub oo ku saabsan weerarka, oo laga arkay dadkii wadanka xukumayay waqtigaas.
Apple TV + kaliya ayaa ku dhawaaqay dukumiinti cusub oo gaar ah oo soo saari doona dabayaaqada sanadkan. Barnaamijka waxaa cinwaan looga dhigay "9/11: Gudaha Qolka Dagaal ee Madaxweynaha" wuxuuna na tusi doonaa weerarkii argagixiso ee 2001 iyadoo laga fiirinayo jawaabta degdega ah ee dadkii qabtay xilalka muhiimka ah maalintaas.
Wax soo saar wada shaqeyn ah oo ka socda Apple TV + iyo BBC One
Documentary-ga waxaa ka sheekeyn doona Jeff Daniels waxaana ku jiri doona markhaatiga madaxweynihii hore George Bush y Dick Cheney ka mid ah xilalka kale ee muhiimka u ah dalka. Qaaska ayaa si isku mid ah uga soo muuqan doona Apple TV + iyo kanaalka dowladda Ingiriiska ee BBC One.
Bandhigu wuxuu hawada soo gali doonaa bisha Sebtember si loo xuso sannad-guurada 20-aad ee 11-ka Sebtember. Gudaha Boqortooyada Midowday (UK), tan gaarka ah ayaa hawada soo gali doonta marka hore BBC Mid waxaana laga heli doonaa Apple TV + goor dambe. Dunida inteeda kale, waxay si gaar ah uga soo muuqan doontaa Apple TV +.
Shirkaddu waxay sharraxaysaa in dokumenteriga uu sheegi doono wixii ka dambeeya weerarka, iyadoo la tirinayo go'aan-qaadashada deg-degga ah 12-ka saac ee ugu horreeya ka dib markii ay diyaaraduhu duqeeyeen Trade Center World. Waxaa ka muuqan doona wareysiyo lala yeelanayo xubnaha sarsare ee maamulka iyo taliyayaasha amniga qaranka oo xilligaas firfircoonaa.
Bishan Sebtember 11 gaar ah waxay umuuqataa inay tahay tii ugu horreysay wax soo saar rasmi ah ka yimid Apple. Tan macnaheedu waxa weeye in wax soo saarka ay maalgeliyeen labada shirkadood ee Apple iyo BBC, waana sababtaas sababta loogu sii deyn doono labada TV ee Apple TV + iyo kan BBC One.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple TV + wuxuu sii deyn doonaa dukumenti dokumenti ah oo ku saabsan weerarkii ka dhacay daarihii mataanaha ahaa ee 11/XNUMX
Kuo wuxuu leeyahay soosaarida MacBook Pros waxyar ayey bilaabmi doontaa
Akadamiyadda kobcinta Apple si ay uga furato Xarunta Wax Barashada Cusub dalka Sacuudiga